Ch 17 John – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Jaona / Ch 17 John
17:1 Jesosy nilaza izany, ary avy eo, nanopy ny masony ho amin'ny lanitra, hoy izy:: "Ray, efa tonga ny ora: mankalazà ny Zanakao, ka dia ny Zanaka mba hanomezany voninahitra anao,
17:2 toy ny efa nomenao fahefana amin'ny nofo rehetra ho Azy, ka mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy.
17:3 Ary izao no fiainana mandrakizay: dia ny mahafantatra anao, ilay hany Andriamanitra marina, sy i Jesoa Kristy, Izay efa nirahinao.
17:4 Izaho efa nankalaza anao teto an-tany. Efa vita ny asa izay nomenao Ahy hovitaiko.
17:5 Ary ankehitriny Ray, hanome voninahitra Ahy ny tenanao ao anatin'ny, dia amin'ny voninahitra niarahako nanana taminao, izao tontolo izao eo anatrehan'ny indrindra dia.
17:6 Nasehoko ny anaranao tamin'ny olona izay nomenao Ahy avy amin'izao tontolo izao. Anao izy ireo, ka natolony ahy. Ary notandremany ny teninao.
17:7 Ankehitriny dia mahatsapa fa ny zavatra rehetra nomenao Ahy dia avy aminareo.
17:8 Fa efa nomeko azy ireo ny teny izay nomenao ahy. Ary nanaiky izany teny izany, ary izy ireo dia marina tokoa aho dia nahatakatra fa nivoaka avy aminao, ary nino izy fa Hianao no naniraka Ahy.
17:9 Izaho mangataka ho azy. Tsy mivavaka ho an'izao tontolo izao, fa ho an'ireo izay nomenao ho ahy. Satria Anao.
17:10 Ary izay rehetra Ahy dia Anao, ary izay rehetra Anao dia Ahy, ary izaho ankalazaina eo ity.
17:11 Ary aza aho dia tsy amin'izao tontolo izao, ireto no ho eto amin'izao tontolo izao, ary izaho ho any aminao. Ray masina indrindra, hiaro azy ireo tamin'ny anaranao, ireo izay nomenao ho ahy, mba ho iray, na dia tahaka ny mahiray Antsika.
17:12 Raha mbola teo aminy, I niaro azy tamin'ny anaranao. Efa niambina ireo izay nomenao ho ahy, ary tsy iray amin'izy ireo no very, afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana, ka dia ny mba hahatanteraka ny Soratra Masina.
17:13 Ary ankehitriny izaho ho any aminao. Fa izaho no miteny izany eto amin'izao tontolo izao, mba manana ny fahafenoan'ny fifaliako-pony ireo.
17:14 Efa nomeko azy ny teninao, ary halan'izao tontolo izao izy ireo. Fa izy ireo tsy naman'izao tontolo izao, toy I, koa, tsy mba momba ny an'izao tontolo izao.
17:15 Tsy nivavaka aho fa ianao dia hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy ireo ho amin'ny ratsy.
17:16 Izy ireo tsy naman'izao tontolo izao, tahaka ny anahafako tsy naman'izao tontolo izao.
17:17 Manamasina azy amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana.
17:18 Toy ny nanirahanao Ahy ho amin'izao tontolo izao, Izaho koa mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao.
17:19 Ary izany dia ho azy fa manamasina ny tenako, ka dia, koa, Mety ho masina amin'ny fahamarinana.
17:20 Fa izaho tsy mba mivavaka ho azy ireo ihany, fa koa ho an'ireo izay noho ny teniny no mino Ahy.
17:21 Tahaka izany anie izy rehetra ho iray. Toy, Ray, dia ato amiko, ary Izaho ao aminareo, toy izany koa izy ireo mba ho ao amintsika: mba hinoan'izao tontolo izao fa Hianao efa naniraka Ahy.
17:22 Ary ny voninahitra izay nomenao ho ahy, Efa nomeko ho azy ireo, mba ho iray, tahaka izahay koa dia iray.
17:23 Izaho ao aminy, ary ianareo dia ato amiko. Tahaka izany anie izy ireo ho tanteraka ho iray. Ary enga anie ny an'izao tontolo izao fa Hianao no naniraka Ahy sady efa tia azy, tahaka anareo ihany koa tia ahy.
17:24 Ray, Sitrapoko anie no hatao fa izay itoerako, ireo izay nomenao ho ahy koa ho amiko, mba hahita ny voninahitro izay nomenao ahy. Fa ianao efa tia ahy talohan'ny nanorenana izao tontolo izao.
17:25 Ray tena fotsiny, izao tontolo izao tsy nahalala anao. Fa Izaho nahalala anao. Ary ireto efa mahalala fa Hianao no naniraka Ahy.
17:26 Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola hampahafantariko ihany, ka dia ny fitiavana izay ianareo efa tia Ahy mba ho ao aminy, ary toy izany koa aho mba ho ao aminy. "